कतिपय आमाको उपचार गर्दा ऋण लागेर अरब गएको पाइयो, त्यो पनि भर्खरको १९ वर्षको केटा, त्यो पनि उमेर बढाएर पोसपोर्ट बनाएको । विचरा कस्तो मायालाग्दो ? कोही भाइलाई पढाउने पैसा नपुगेर गएका दिदीहरू पनि भेटिए । कोही बाबाको उपचारका लागि पैसा कमाउन गएकाहरू । बिल्कुलै साना–साना सपनाहरू । मलाई लाग्थ्यो के यो स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूतिको काम सरकारको हैन र ? के यो राज्यको सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र पर्दैन र ?
अनि मभित्र एक प्रकारको आक्रोश जन्मिन्थ्यो ।
मैले बुझेको अरब अर्काे के पनि हो भने अलिकति कम लेखपढ गरेका मानिसहरू त्यता छन् कि भन्ने लाग्छ । अलिकति अस्लिलता पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । औंठाछापहरू पनि धेरै छन् अरबमा । उनीहरू पनि भन्छन् – यो यूएई त नेपालीले बनाएको हो तर म अझै पनि भन्छु, त्यो यूएई इन्जिनीयरले नै बनाएको हो । यो हाँस्ने कुरा त हैन । हुन त इन्जिनीयरले कतार बनाए । यहाँ भनिन्छ – नेपालीहरूले कतार बनाए । यो कुनै पनि विषयलाई कसरी बुझ्ने र प्रस्तुति दिने भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
बरु उँट बाँध्ने गोठ चाहिँ नेपालीहरूले बनाए, बगैंचामा फूल रोपे पानी हाले ।
मूलतः सबैका आ–आफ्ना दुश्मन हुन्छन् । पृथ्वीको पनि आफ्नै दुश्मन छ । बेलाबेलामा हल्लिन्छ पृथ्वी । ती हल्लाइहरूका कारण नै पृथ्वीमा नयाँ–नयाँ संरचनाहरू देखा पर्छन् । जस्तो कि हिमाल, पहाड, खोचहरू । यो एकबारको जुनीको पनि आफ्नै दुश्मन छ । दुश्मन भएकै कारण हामी बेलाबेला नराम्ररी हल्लिने गर्छाैं तर जसरी पृथ्वी हल्लिनु उसको नियम हो, त्यसैगरी एकबारको जुनी हल्लिनु हाम्रो नियम हो । यहाँ नियमभन्दा बाहिर कोही पनि छैन । समयको घडी त मानिसहरूले आफूलाई सहज बनाउन पछि बनाएको हो । पृथ्वीको कुनै समय छैन तर नियम छ पृथ्वीसँग । नियम एकबारको जुनीमा पनि हुने रहेछ । अन्यथा दुश्मन त सबैका छन् । अरुका दुश्मन आफू भइन्छ पनि ।
जस्तो कि प्रचण्डकै कुरा गरौ न । प्रचण्ड सबैका दुश्मन भए ।